Golaha Guurtida Hawiye oo Baaq Culus ka soo saaray Dagaalada Sh/hoose December 19, 2013 |
Golaha Guurtida Hawiye oo Baaq Culus ka soo saaray Dagaalada Sh/hoose December 19, 2013
Kadib kulan ay Maanta Magaalada Muqdisho ku yeesheen Golaha Guurtida Beelaha Hawiye ayaa waxa ay kaga hadleen Dagaalada Sokeeye ee Maalmahaan dambe ku soo noq noqday qeybo ka tirsan Gobolka Sh/hoose.
Afhayeenka Golaha Guurtida Beelaha Hawiye Xuseen Calasoow Afrax Yare oo Saxaafadda la hadlay ayaa sheegay dood dheer iyo Falaqeyn ay Goluhu ka yeesheen arrinkaasi in ay ka so saareen Bayaan kaasoo ku saleysan qodobo kala duwan oo ku aadan dirirta ka taagan Gobolka Sh/hoose.
Bayaanka ayaa u qornaa sidatan
1:Dib u Heshiisiin Ballaaran in loo sameeyo shacabka ku dhaqan Gobolka Sh/hoose.
2:Amniga Goobta shirka in ay ilaaliyaan Ciidamada AMISOM
3:Dowladda in ay hoggaamiso dib u Heshiisiinta
4:Shacabka ku nool Shabeelaha Hoose in laga wada qeyb galiyo dib u heshiisiinta.
5:Gogosha in ay dhigaan Beelaha Hawiye lana dhigo Shabeelaha Hoose.
6:Gogosha waxaa lagu Heshiisiinayaa Daamo iyo Biyo Maal , Digil ayaa Garsoore ka noqonaya Gogoshaas.
7: Xildhibaanada la sheegay in ay hurinayaan Colaada waxa ay iloobeen dhaarta ay u mareen qaranka Soomaaliyeed waxeyna qirteen in ay yihiin Xildhibaanno qabiil oo ayna u sineen umadda Soomaaliyeed , waxeyna Jabiyeen qodobkii dhaarta ee Dastuurka.
Bayaanka ay maanta ka soo saareen Golaha Guurtida Hawiye dagaalada ka soo Cusboonaaday Deegaanno ka tirsan Gobolka Sh/hoose ayaa waxa uu qeyb ka noqonayaa baaqyada kala duwan ee Nabadeed oo ay Siyaasiyiinta , waxgaradka , Xildhibaanada iyo Aqoonyahannada Soomaaliyeed u jeedinayaan dhinacyada ku dagaalamaya Gobolkaasi.